Wararka Maanta: Khamiis, Oct 7 , 2021-Fannaanada Kiin Jaamac oo sheegtay in bandhig faneed keedu caawa dhacayo
Kiin iyo DJ Subeer oo siwada jira warbaahinta ugula wada hadlay Hargaysa, ayaa sheegay in bandhigoodu uu sidii loo balan sanaa caawa qabsoomi doono.
DJ Subeer ayaa ogolaanshaha bandhiga uga mahadceliyay madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadiisa.
"Waxan halkan ka caddaynayaa in bandhig-faneedkii walashay Kiin Jaamac yare, uu caawa dhacayo sidii awalba ay ahayd, dadka tigidhada qaatay, dadka suudhadhka gashaday waa inoo iyo caawa iyo Crown Plaza hotel, aad iyo aadna waxaanu ugu mahadcelinaynaa madaxweyna iyo xukuumada" ayuu yidhi DJ Subeer.
Kiin ayaa iyaduna dhankeeda u mahadcelisay madaxweynaha iyo xukuumadiisa, waxayna sheegtay in bandhigeedu uu caawa qabsoomayo.
"Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhamaantiin, waxan idiin sheegaya sidii aan ku balan sanayn in showgeenii soconayo, waxan u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa" ayay tidhi Kiin Jaamac.
Qoraal kasoo baxay wasaarada diinta iyo awqaafta ayaa hore loogu joojiyay bandhig-faneedka.